သိုးစော်နံနေတဲ့ အဆီ တစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးတွေကို ကျွန်မ အခုနိုပ်ပေးနေရတယ်။ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ဖြစ်ရပ်မှန် / သိုးစော်နံနေတဲ့ အဆီ တစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးတွေကို ကျွန်မ အခုနိုပ်ပေးနေရတယ်။
သိုးစော်နံနေတဲ့ အဆီ တစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးတွေကို ကျွန်မ အခုနိုပ်ပေးနေရတယ်။
Apann Pyay 3:20 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ လက်တင်အမေရိက ကလေးငယ် ၃၅သန်းအတွက် ရှာကီရာဟာ သူမရဲ့လုံးဝန်းတဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို ဝှေ့ရမ်းလှုပ်ခါပြစ်လိုက်တယ်။ အင်ဂျလီနာဂျိုလီ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီထဲက ပန်းနုရောင်ပေါင်တံတွေဟာအဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ အာဖရိက ဒုက္ခသည်တွေဆီ တဖွဲဖွဲဝင်လာမယ့် ရံပုံငွေ တွေပဲ။ကဲ . . . ဘာထူးလို့လဲ ကျွန်မမောင်လေး နောက်နှစ်ကျောင်းဆက် ထားနိုင်ဖို့ သိုးစော်နံနေတဲ့ အဲ့ဒီအဆီ တစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးတွေကို ကျွန်မအခုနိုပ်ပေးနေရတယ်။ကျွန်မအမေမြန်မြန်နေပြန်ကောင်းလာအောင်လို့ ကျွန်မစကပ်တွေ တဖြည်းဖြည်းတိုတိုလာရတယ်။ တစ်လ တစ်လ အလျှင်မီအောင် အိမ်စရိတ်ထောက်ဖို့အရေး ရှင့်ကိုအကြင်နာတွေပေးပေးနေရတယ်ကောင်း ရောင်းကောင်းဝယ် . . . ဟုတ်တယ်ဟုတ် . . ကျွန်မတို့ အထည်တွေ မချုပ်ကြတော့ဘူး။စက်ရုံတွေပိတ်သွားပြီ ကျွန်မတို့ပန်းရံလည်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးလေ ခွန်အားနဲ့အတက်ပညာတွေ ဈေးပေါနေ တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဈေးကောင်း ရတာပဲ ကျွန်မတို့ရောင်းစားလိုက်ကြတော့တယ် ကျွန်မနာမည်လား . . အ မေပေးခဲ့တာတောင်မေ့တေ့တေ့ရယ် ကျွန်မနာမည် ကြယ်စင် . ကျွန်မနာမည် နံနက်ခင်း . ကျွန်မနာမည် တာရာ . ကျွန်မနာမည် အလင်္ကာ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်မတို့မတည်မြဲကြဘူး။
ကျွန်မတို့ဟာ လျှပ်စီးကြောင်းနဲ့ ပတ်ကြားအက်နေတဲ့ မိုးတိမ်တွေပဲ ကွက်ကျားမိုးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာ ချိန်မှာ ဘွားကနဲ ပေါက်ရောက် လာတဲ့ မိုးဦးမှိုပွင့်တွေပဲ စီးဆင်းနေတဲ့ငွေကြေး စာရင်ဇယားတွေဘေးမှာ ကွေးညွှတ်နေတဲ့ မြစ်ကျိုးအင်းတွေပဲ လျှော်ဖွတ်ပြီး မီးပူတိုက်ထားတဲ့ ဘေထုတ်ထည်ကိုကြည့်သလို ရှင် ကျွန်မကိုမကြည့်ပါနဲ့ ရှင့်စကားနဲ့ ကျွန်မကိုအဖျားခတ်လိုက်ပုံက ကျွန်မတို့ကပဲ သူများအိမ်ထောင် ရေးတွေပေါ် လမ်းကြိတ်စက်တက်မောင်းနေသလိုလို ကျွန်မတို့ကပဲ သူများမိသား စုတွေကို ကူးတို့ဆိပ်မှာ မှို့အိတ် ဖွင့်နေသလိုလို ကျွန်မတို့ကပဲ ရှင်တို့ရဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့စာမျက်နှာတွေကို ပလုပ်တုတ် ခေါက် နေသလိုလို။အချစ်တဲ့ . . . ရှင်လေချဉ်တက်လိုက်သလား ဘီယာစော်နံလိုက်တာဟုတ် ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မတို့ အလုပ်က သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူးကျွန်မတို့ဘ၀တွေကလည်း ၀ါကျတည် ဆောက်ပုံမ မှန်ကန်ပါဘူး ဒါပေမယ့် . . ဒါဟာ အမှောင်နဲ့ ချိန်တွယ်ရတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပါရှင်။
“အမ္ဗပါလီ” အစ “မော်နီကာဗယ်လူချီ” အဆုံး ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့ စက်ရုံမှာ အချိန်ပိုဆင်းရတဲ့ ခွေးသွားစိတ် တွေပါပဲ။တကယ်တော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာရတာလည်း ကျွန်မတို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး အိုစမာဘင်လာဒင် သေဆုံးသွား တာလည်း ကျွန်မတို့နဲ့ တခြားစီ ဒေါ်လာဈေး ကမောက်ကမဖြစ်အောင် ကျွန်မတို့တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး ကျွန် မတို့ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် ကဗျာစပ်မနေပါနဲ့ ရှင်ရယ် ဘောစိနော် ဘော်ကယ်ကြေးလေး စ်ပဲခြောက် ပြားနဲ့ ရှင်ကျွန်မကို ဒီအတိုင်းပြစ်မထားခဲ့နဲ့ဦး။အိုခေ . . . ဒီငယ်ကျွမ်းဆွေ တစ်ပုဒ်ဆိုပြီးသွားရင် တစ်ဆက်ရှင် စာအချိန်စေ့ပြီနောက်တစ်ခါလည်း ကျွန်မတို့ဆီကို ဒီလို ဆင်တွေတအုပ်ကြီးနဲ့ လာရောက်အားပေးနိုင်ပါစေ။သင့်(ခ်)ယူ . . . ဘိုင့်ဘိုင့် . . . ဆီးယူ . . . ဖလိုင်းကစ်(စ်)။ ။
Credit to မောင်ရှင်စော (ရတီ 2012)
ဆငျးရဲမှဲတနေတေဲ့ လကျတငျအမရေိက ကလေးငယျ ၃၅သနျးအတှကျ ရှာကီရာဟာ သူမရဲ့လုံးဝနျးတဲ့ တငျပါးအိအိတှကေို ဝှရေ့မျးလှုပျခါပွဈလိုကျတယျ။ အငျဂလြီနာဂြိုလီ လှဈဟပွလိုကျတဲ့ ညဝတျအင်ျကြီထဲက ပနျးနုရောငျပေါငျတံတှဟောအဟာရခြို့တဲ့နတေဲ့ အာဖရိက ဒုက်ခသညျတှဆေီ တဖှဲဖှဲဝငျလာမယျ့ ရံပုံငှေ တှပေဲ။ကဲ . . . ဘာထူးလို့လဲ ကြှနျမမောငျလေး နောကျနှဈကြောငျးဆကျ ထားနိုငျဖို့ သိုးစျောနံနတေဲ့ အဲ့ဒီအဆီ တဈထပျ အသားတဈထပျ ခန်ဒာကိုယျကွီးတှကေို ကြှနျမအခုနိုပျပေးနရေတယျ။ကြှနျမအမမွေနျမွနျနပွေနျကောငျးလာအောငျလို့ ကြှနျမစကပျတှေ တဖွညျးဖွညျးတိုတိုလာရတယျ။ တဈလ တဈလ အလြှငျမီအောငျ အိမျစရိတျထောကျဖို့အရေး ရှငျ့ကိုအကွငျနာတှပေေးပေးနရေတယျကောငျး ရောငျးကောငျးဝယျ . . . ဟုတျတယျဟုတျ . . ကြှနျမတို့ အထညျတှေ မခြုပျကွတော့ဘူး။စကျရုံတှပေိတျသှားပွီ ကြှနျမတို့ပနျးရံလညျးမလုပျနိုငျကွဘူးလေ ခှနျအားနဲ့အတကျပညာတှေ စြေးပေါနေ တဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ စြေးကောငျး ရတာပဲ ကြှနျမတို့ရောငျးစားလိုကျကွတော့တယျ ကြှနျမနာမညျလား . . အ မပေေးခဲ့တာတောငျမတေ့တေ့ရေ့ယျ ကြှနျမနာမညျ ကွယျစငျ . ကြှနျမနာမညျ နံနကျခငျး . ကြှနျမနာမညျ တာရာ . ကြှနျမနာမညျ အလင်ျကာ ဟုတျတယျလေ ကြှနျမတို့မတညျမွဲကွဘူး။
ကြှနျမတို့ဟာ လြှပျစီးကွောငျးနဲ့ ပတျကွားအကျနတေဲ့ မိုးတိမျတှပေဲ ကှကျကြားမိုးတှေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ လာ ခြိနျမှာ ဘှားကနဲ ပေါကျရောကျ လာတဲ့ မိုးဦးမှိုပှငျ့တှပေဲ စီးဆငျးနတေဲ့ငှကွေေး စာရငျဇယားတှဘေေးမှာ ကှေးညှတျနတေဲ့ မွဈကြိုးအငျးတှပေဲ လြှျောဖှတျပွီး မီးပူတိုကျထားတဲ့ ဘထေုတျထညျကိုကွညျ့သလို ရှငျ ကြှနျမကိုမကွညျ့ပါနဲ့ ရှငျ့စကားနဲ့ ကြှနျမကိုအဖြားခတျလိုကျပုံက ကြှနျမတို့ကပဲ သူမြားအိမျထောငျ ရေးတှပေျေါ လမျးကွိတျစကျတကျမောငျးနသေလိုလို ကြှနျမတို့ကပဲ သူမြားမိသား စုတှကေို ကူးတို့ဆိပျမှာ မှို့အိတျ ဖှငျ့နသေလိုလို ကြှနျမတို့ကပဲ ရှငျတို့ရဲ့ တိတျဆိတျနတေဲ့ ယဉျကြေးမှု့စာမကျြနှာတှကေို ပလုပျတုတျ ခေါကျ နသေလိုလို။အခဈြတဲ့ . . . ရှငျလခေဉျြတကျလိုကျသလား ဘီယာစျောနံလိုကျတာဟုတျ ပါတယျ ဟုတျပါတယျ ကြှနျမတို့ အလုပျက သဒ်ဒါစညျးမဉျြးစညျးကမျးနဲ့ မကိုကျညီပါဘူးကြှနျမတို့ဘဝတှကေလညျး ၀ါကတြညျ ဆောကျပုံမ မှနျကနျပါဘူး ဒါပမေယျ့ . . ဒါဟာ အမှောငျနဲ့ ခြိနျတှယျရတဲ့ ဝနျဆောငျမှု ပါရှငျ။
“အမ်ဗပါလီ” အစ “မျောနီကာဗယျလူခြီ” အဆုံး ကြှနျမတို့အားလုံးဟာ ရှငျတို့ယောင်ျကြားတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျတဲ့ စကျရုံမှာ အခြိနျပိုဆငျးရတဲ့ ခှေးသှားစိတျ တှပေါပဲ။တကယျတော့ ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာရတာလညျး ကြှနျမတို့နဲ့ မဆိုငျပါဘူး အိုစမာဘငျလာဒငျ သဆေုံးသှား တာလညျး ကြှနျမတို့နဲ့ တခွားစီ ဒျေါလာစြေး ကမောကျကမဖွဈအောငျ ကြှနျမတို့တဈခါမှ မလုပျခဲ့ဖူးဘူး ကြှနျ မတို့ကို ရေးကွီးခှငျကယျြ ကဗြာစပျမနပေါနဲ့ ရှငျရယျ ဘောစိနျော ဘျောကယျကွေးလေး ဈပဲခွောကျ ပွားနဲ့ ရှငျကြှနျမကို ဒီအတိုငျးပွဈမထားခဲ့နဲ့ဦး။အိုခေ . . . ဒီငယျကြှမျးဆှေ တဈပုဒျဆိုပွီးသှားရငျ တဈဆကျရှငျ စာအခြိနျစပွေီ့နောကျတဈခါလညျး ကြှနျမတို့ဆီကို ဒီလို ဆငျတှတေအုပျကွီးနဲ့ လာရောကျအားပေးနိုငျပါစေ။သငျ့(ချ)ယူ . . . ဘိုငျ့ဘိုငျ့ . . . ဆီးယူ . . . ဖလိုငျးကဈ(ဈ)။ ။
Credit to မောငျရှငျစော (ရတီ 2012)